Ipropati yoMfundi kuphela: I-En-suite yakudala ethule - LOS 41weeks
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguMiroslav
UMiroslav unezimvo eziyi-205 zezinye iindawo.
Indlela yokwenza umbuzo: khetha umnqweno wokungena kunye nomhla wokuphuma, inani leendwendwe, skrolela ezantsi kwephepha kwaye ucofe kuQhagamshelwano lomninimzi.
Isaphulelo esikhethekileyo se-€ 1,000 sisebenza kuphela ekubhukisheni kwisiqingatha sonyaka 2, ukusuka nge-09/01/2020 ukuya kwi-29/05/2020.
-Ilayisensi yokuba ubuncinci beeveki ezingama-20 (isemester 2), kuNyaka wokufunda wama-2020/21 eNido Curraheen Point kuphela
-Ivumelekile ukubhukisha okwenziwe phakathi kwe-5 Novemba 2020 kunye ne-9 kaJanuwari 2021 eNido Curraheen Point ngokuxhomekeka ekufumanekeni
– Esi sisinikezelo esilinganiselweyo kwaye sinikezelwa ngokuza kuqala, isiseko sokuqala
Ukuhlala kabini kwaMahala kwiiStudios zakudala
Ipaki yekhitshi yasimahla
Umgaqo-nkqubo wokuFika oguquguqukayo
Ukuba ujonge indawo entsha yokuhlala yabafundi e-Cork, emva koko ufikile kwindawo elungileyo, uNido Student uyeza kungekudala kwesi sixeko sichumileyo, sivula ngoSeptemba ka-2020.
Indawo yethu yokuhlala ephambili e-Cork iya kubonelela ngefenitshala epheleleyo, iiflethi zabafundi ezinesitayile, imizuzu nje ukusuka kuzo zonke iiyunivesithi eziphambili kunye neekholeji esi sixeko sihle sinokunikezela. Ukuhamba nje kwemizuzu engama-20 ukusuka kwiKholeji yeYunivesithi yaseCork kunye neCork Institute of Technology, bekungekhe kube lula ukuya ezifundweni.
Izindlu zethu ze-Ensuite zikuvumela ukuba wonwabe elakho igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela eline-ensuite ngelixa ufumana umoya opholileyo wegumbi lokuhlala ekwabelwana ngalo kunye nekhitshi nabanye abantu.
Izitudiyo zethu zikulungele ukuba nendawo yakho. Isitudiyo ngasinye siza negumbi lakho lokuhlambela labucala, ibhedi ephindwe kabini, indawo yokugcina iimpahla, idesika, isitulo kunye nebar yesidlo sakusasa kunye nekhitshi. Khetha kuluhlu lweesayizi zegumbi kunye nemigangatho ukwenza ikhaya lakho eligqibeleleyo.
Nceda uqaphele ukuba ikhitshi kwabelwana ngayo.
Nceda uqaphele le yipropathi yaBafundi Kuphela.
Ngenisa umbuzo phambi kokuba uqinisekise ugcino ukuze uqinisekise ukuba sinako ukuhlangabezana nesicelo sakho sokungena.
Undwendwe lunokucelwa ukuba lusayine isivumelwano sokurenta phambi kokuba lungene.
Kusenokufuneka uMqinisekisi ukuze agqibezele ukubhukisha kwakho.
Imifanekiso yentengiso ivela kwiiflethi zemiboniso. Ezinye zezinto zokuhombisa kunye neqonga ziya kulahleka.
Indawo yokulala ayiqukwanga.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-205 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Umbuki zindwendwe ngu- Miroslav
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cork